Indostrian'ny fanafody - Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd.
Tontolo iainana indostrialy
Lead Fluid Peristaltic pump dia paompy peristaltika any Sina, fanamboarana paompy peristaltika matihanina any Shina. Izy io dia mazoto amin'ny fikarohana sy fampandrosoana, famokarana ary fivarotana paompy peristaltika, paompy syringe, paompy miadidy ary paompy fampitaovana marim-pototra hafa ary kojakoja mifandraika amin'izany, ary manao ny endrika sy ny varotra ny rafitra fanaraha-maso tsiranoka isan-karazany. Retrofit sy consultation teknika.
Hatramin'ny nananganana azy ka hatramin'izao, Lead Fluid dia nifikitra hatrany tamin'ny foto-kevitry ny fanavaozana, ny fahazotoana, ny fahamendrehana, ny fiaraha-miasa ary ny mpanjifa aloha. Miantehitra amin'ny sehatry ny indostria manokana sy ny tombony ara-teknika, dia namolavola andianà vokatra mandroso iraisam-pirenena hatrany izy, nahazo ny fahatokisana sy ny fankasitrahan'ny mpanjifa.
Ny fikaroham-panafody, ny fampandrosoana ary ny famokarana dia mitaky fivontosana, fanokanan-tsiranoka ary potika fandotoana zero mba hanomezana toky ny dingana avo lenta sy ny fiarovana ny vokatra amin'ny indostrian'ny fanafody.
Ny fikorianan'ny ranon-tsolika no zava-dehibe indrindra amin'ny fampiharana ara-pahasalamana, ka izany no mahatonga ny paompy peristaltika mitondra Fluida tena mifanaraka tsara amin'ireo fizotran'ny fitakiana ireo.
Noho ny fipoahan'ny valanaretina tamin'ny taona 2020, nanjary tetikady lehibe nasionaly ny fiarovana ny fiarovana ny fiainana manokana. Tokony ho vonona tanteraka handray ny fivoarana nomerika, tambajotra, ary manan-tsaina manan-danja amin'ny fanovana isika.
Ny paompy peristaltika fluid fluide dia manome rafitra mihidy tanteraka ho an'ny fifehezana aseptika / sterile tsy misy fandotoana.Sterility, fanokanan-drano, fahalotoana aotra.
BT103S paompy peristaltika miovaova hafainganam-pandeha
2. Tohano ny fifandraisana WIFI sy ny fanaraha-maso lavitra ny finday APP.
3. fanoherana mahery vaika, fiarovana mahery, fijanonan'ny hafainganam-pandeha, fihenan-danja miverina miasa, fanidiana hidin-trano fanidiana, fanairana mihidy rotor, fanairana leakage ranon-javatra (tsy voatery).
4. Tohano 5 ~ 24V fidirana fanaraha-maso ivelany malefaka, fifandraisana RS485, mifanaraka amin'ny protokol MODBUS.
BT600F-V3 manome paompy peristaltika manan-tsaina
1. fampirantiana sy fiasan'ny efijery HD LCD super 4.3-inch.
2. Fomba fikorianana, fizarana habetsahan'ny ranoka, fizarana fotoana, fizarana tsingerina (fandaharana) maodely fanefana maro tsy voatery.
3. Tohano ny fifandraisana WIFI, ny fikirakirana lavitra finday APP, ary manana asan'ny fanaraha-maso toy ny fanairana fanakatonana sy fampahatsiahivana hisolo ny fantsom-paompy.
4. Izy io dia manana ny lalana azo ahodina, fiandohana, hafainganam-pandeha, miverina miverina, ary fijanonana manomboka.
Paompy peristaltika mikraoba WSP
1. Fahamarinana avo famenoana ， Ny lesoka dia latsaky ny ± 0.2%.
2. Famolavolana moderina, mora fanitarana, paompy marobe azo alefa mba hamorona rafitra famenoana fantsona maro.
3. Fiara maotera servo avo lenta, tavy lehibe, fikojakojana maimaimpoana, rafitra fantsom-pamokarana Rotary, fahombiazana avo lenta.
4. Ny fantsom-paompy dia ambany ny fatiantoka, ny androm-piainan'ny serivisy mitohy hatramin'ny 1000 ora, ny tahan'ny atenuation 12 ora ＜ 1%.
5. Fampiasana miverina miverina, mitete aotra, fanidiana tampoka.
6. Fantsona madio madio, mora esorina, mora diovina sy esterina, manohana ny CIP sy SIP.
7. Ny fantsona fantsona dia tsy mora sakanana, ary afaka miatrika mora foana ireo fitaovana mora miangona sy manana viscosity toa ny vakana andriamby, glycerine, sns.
8. Azo ampiasaina amin'ny tanana na ampiasaina amin'ny tsipika famokarana mandeha ho azy.
Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd. dia mifantoka amin'ny famolavolana, fampandrosoana, famokarana ary marketing amin'ny paompy peristaltika sy paompy syringe marina, ary nanolo-tena hanome ny mpampiasa vokatra avo lenta sy serivisy teknika tonga lafatra. Ankoatry ny fananana andiam-pamokarana peristaltika feno indrindra sy ny tsipika vokatra pump syringe, ny Lead Fluid dia afaka manome serivisy namboarina OEM arakaraka ny filan'ny mpampiasa ihany koa. Ny traikefa amin'ny fampiroboroboana vokatra Lead Fluid dia afaka manome anao torolàlana amin'ny fampiharana haingana sy soso-kevitra ho an'ny paompy peristaltika sy paompy syringe, ary hanomezana ho an'ny mpampiasa kalitao avo lenta, avo lenta ary avo lenta.